Worder: Otu esi eji emeri na Appalabrados | Androidsis
Worder: Otu esi eji emeri na Appalabrados
Ignacio Sala | 22/11/2021 18:00 | Ngwa gam akporo, Gam akporo Ndị aghụghọ
Dịka usoro egwuregwu squid nke Netflix si adabereghị na echiche mbụ, egwuregwu egwuregwu a ma ama na-apụta, ọ bụghịkwa. N'ezie, dabere na egwuregwu bọọdụ a ma ama Scrabble, na nke ahụ dịkwa maka ngwaọrụ mkpanaka.
Maka ndị niile nakweere Apalabrados dị ka usoro ntụrụndụ mgbe ụfọdụ ma ọ bụ mgbe niile, ma ọ bụrụ na mgbe ụfọdụ. ị rapaara ma ọ bụ na ị nweghị ike ịchọta okwu ahụ ị chọrọ, webụsaịtị Worder dị ebe ahụ iji nyere gị aka.
1 Gịnị bụ Apalabrados
2 Kedu ka Apalabrados si arụ ọrụ
3 Kedu ihe bụ Worder
4 Ka Worder si arụ ọrụ
4.1 Egwu dị
4.2 Ụkpụrụ okwu
5 Usoro aghụghọ
6 Nhọrọ na Worder
Gịnị bụ Apalabrados
Dịka m kwuru n'elu, Apalabrados bụ ụdị dijitalụ nke egwuregwu bọọdụ Scrabble kpochapụwo, egwuregwu nke ebumnobi ya bụ idowe akwụkwọ ozi niile anyị nwere na bọọdụ site n'ịkpụ okwu. Akwụkwọ ozi ọ bụla nwere akara dị iche iche, akara a na-agbakwunye iji nweta ọnụọgụ ọnụọgụgụ maka okwu ahụ.
Apalabrados dị maka gị budata kpamkpam n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ n'ime ngwa.
N'ihe karịrị afọ 10 n'ahịa, ọ bụ otu n'ime ngwa kachasị mma dị na Ụlọ Ahịa Play maka na-emega mint anyị kwa ụbọchị, ịmụta okwu ọhụrụ, ịgbasa okwu anyị ...
La Nhọrọ kacha mma maka Apalabrados bụ ngwa ọrụ nke egwuregwu a, Scrabble GO, ngwa nwere nyocha dị mma site n'aka ndị ọrụ karịa Apalabrados nwere ọnụ ọgụgụ nbudata na ọkwa.
Scrabble GO dị maka dbudata n'efu, nwere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'etiti ngwa ahụ
Kedu ka Apalabrados si arụ ọrụ
Apalabrados na-etinye bọọdụ nke anyị n'aka 15 square x 15 square. Anyị nwere ike ịmepụta okwu ma kwụ n'ahịrị ma kwụ ọtọ na-eji mkpụrụedemede ndị etinyegoro na bọọdụ.
Ọ bụrụ na anyị etinye ibe n'igbe ndị ahụ akara na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ ọbara ọbara. A na-agbasa akara ahụ na-eso ụkpụrụ a:
DP: Okwu a na-amụba akara gị abụọ.
TP: Okwu a na-amụba akara gị site na atọ.
DL: Akwụkwọ ozi dị n'igbe a, okpukpu abụọ nke akara gị.
TL: Akwụkwọ ozi dị n'igbe a ji okpukpu atọ karịa akara gị.
Na mbido, onye ọkpụkpọ ọ bụla na-enweta akara ngosi 7. Onye ọkpụkpọ mbụ ga-etinyerịrị otu okwu na-agafe na etiti etiti bọọdụ ahụ. Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ enweghị akwụkwọ ozi zuru oke iji mepụta okwu, ọ na-enweta akara ruo mgbe ọ nwere ike ide okwu.
Kedu ihe bụ Worder
Worder bụ weebụsaịtị na-enye anyị ohere chọta okwu dabere na ụkpụrụ, ma maka Okwu, dị ka crosswords, Scrabble, egwuregwu nke hangman na ihe ọ bụla ọzọ okwu egwuregwu. Ma, na mgbakwunye, anyị nwekwara ike iji ya maka ebumnuche ndị ọzọ dị ka n'ịmepụta uri ma ọ bụ egwu na-achọ okwu ndị na-ada ụda.
Ibe weebụ a dị mma dị ka enyemaka oge ụfọdụ na Apalabrados, ebe ọ bụ na ọ bụghị na-anọchi anya uru dị mkpa karịa ndị asọmpi gị. N'iburu n'uche na ọ bụ egwuregwu ịsọ mpi ma gosipụta ihe ọmụma gị, ọ baghị uru iji ya mgbe niile iji merie egwuregwu niile.
Ka Worder si arụ ọrụ
Worder na-enye anyị ụzọ abụọ iji lelee okwu nke anyị chọrọ mgbe niile.
Usoro a na-enye anyị ohere tinye mkpụrụedemede niile anyị nwere iji mepụta okwu. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị nwere mkpụrụedemede: A, A, V, O, S, anyị ga-etinye akwụkwọ ozi ndị ahụ (ọ dịghị mkpa n'usoro) n'ime igbe ọchụchọ ka webụ weghachi okwu niile enwere ike ịmepụta. tinyere akwụkwọ ozi ndị ahụ.
Anyị nwekwara ike iji ya jiri akara mmuke dochie ụfọdụ mkpụrụedemede, asterisks bụ mkpụrụedemede ndị ọ ga-ejikọta na ndị anyị debanyere iji mepụta okwu bara uru. Usoro usoro okwu adịghị mkpa.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị tinye mkpụrụedemede VOS **, Worder ga-achọ okwu ndị gụnyere mkpụrụedemede atọ ahụ, okwu ndị na-agaghị adịcha n'usoro n'usoro. Ọnụ ọgụgụ kacha elu nke akara mmuke anyị nwere ike iji bụ 3.
Ihe na-agbagwoju anya na Apalabrados mgbe anyị chọrọ were uru nke akwụkwọ ozi ndị dịlarị na bọọdụ ahụ. Nke a bụ ọmụmaatụ ụfọdụ ka Worder nwere ike isi nyere anyị aka ma a bịa n'ịchọta okwu dịka ụkpụrụ ụfọdụ siri dị:
Okwu "ZU-" na-amalite na ZU na-enweghị oke mkpụrụedemede. CLOG.
Okwu "-FAZ" na-ejedebe na FAZ na-enweghị oke mkpụrụedemede. AGBỤTA.
«…» Ga-egosi anyị 3-akwụkwọ ozi okwu. KEDU.
"-ZZ" okwu nwere mkpụrụedemede Z ugboro abụọ. JAZZ.
Okwu «..LA» na-amalite na mkpụrụedemede abụọ na-ejedebe na LA. Ọ bụrụ na kama ide a colon, anyị na-ede ọzọ, ọnụ ọgụgụ nke ihe ga-abụ ọnụ ọgụgụ nke akwụkwọ ozi na okwu ga-egosi tupu agwụcha LA. ỌJỌỌ.
"HO-LA" ga-egosi anyị okwu na-enweghị oke mkpụrụedemede na-amalite na H O wee kwụsị na A. Nnọọ.
Okwu "HL-" nke na-amalite na H, na-esote akwụkwọ ozi ọ bụla, mgbe ahụ L ga-egosipụta na mkpụrụedemede dị iche iche ga-eso na-enweghị nọmba emechara. HALLO.
"-MI.TE" okwu na-ejedebe na MI sochiri leta na NTE. Ị riri.
"-Z-MIND" okwu na-agwụ na MIND ma nwee a Z. N'ezi ezi uche.
Na nkenke, ka ịchọọ okwu anyị ga-adabere na isi ihe na njiko.
na pọọ na-anọchi anya ọnụọgụ mkpụrụedemede anyị chọrọ igosi.
na edemede na-anọchi anya mkpụrụedemede al na-enweghị oke ọ bụla.
Ụzọ ọchụchọ abụọ ahụ enwere ike ijikọta, ka ibelata ọnụ ọgụgụ okwu.
Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ụdaume, sonyere ha na-emepụta diphthongs, hiatuses ma ọ bụ triphthongs.
Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ mgbochiume, tinye ha ọnụ ka ịmepụta mkpụrụokwu mkpụrụokwu ị na-arụ ọrụ.
Ị na-eji okwu kacha akara n'ime igbe ndị nwere akara mkpụrụedemede na mkpụrụedemede okpukpu abụọ ma ọ bụ atọ.
Tinye okwu gị n'ime okpukpu abụọ ma ọ bụ atọ akara edemede na okwu n'ihu nke gị.
Ọ bụrụ na enwere U na bọọdụ ma ị nwere mkpụrụedemede Q, wepụ ya ozugbo enwere ike.
Otu ihe a na-eme X na Ñ, ebe ọ bụ na ọnụ ọgụgụ okwu ndị nwere mkpụrụedemede ndị a adịkarịghị karịa nke mbụ na-abata n'uche ya na mkpụrụedemede Ñ.
Nhọrọ na Worder
Ọ bụrụ na ịchọghị iji ibe weebụ chọta okwu ndị ị chọrọ mgbe niile, ị nwere nhọrọ ọzọ dị site na ngwa Apalabrados.org.
Ngwa na na-enye anyị ohere ịchọta mkpụrụedemede na okwu site na iji usoro usoro yiri nke ahụ Worder na-enye anyị ma na-enye anyị ohere ịchọta okwu ruru mkpụrụedemede iri na abụọ.
Nabata, ọ dị maka gị budata n'efu, gụnyere mgbasa ozi, mana ị naghị azụta in-app. Ọ bụ dakọtara na ma iOS na Android.
Apalabrados.org Chet wee merie na Apalabrados
Developer: IOAPPS IGBO IWU IMO SL.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Worder: Otu esi eji emeri na Appalabrados
Otu esi etinye NFC na mkpanaka na-enweghị ya